In xagaagii 2009, telefoonada gacanta ayaa lagu soo wacayo oo dhan guud ahaan Rwanda. Waxa intaa dheer in malaayiinta wicitaanada dhexeeya qoyska, asxaabta, iyo jaalayaashooda ganacsi, oo ku saabsan 1,000 Rawanda u helay call a ka Yashuuca Blumenstock iyo saaxiibadii. Cilmibaadhayaasha ayaa waxaa lagu baranayay Xoolo iyo saboolnimada by samaynta baadhitaan dadka kuwaas oo lagu kala sooc lahayn raystay ka database ka mid ah 1.5 milyan oo macaamiil ka bixiyaha telefoonka gacanta ugu weyn Rwanda ee. Blumenstock iyo asxaabtii ka codsaday ka qaybgalayaasha haddii ay doonayaan in ay ka qayb qaataan sahan, sharxay nooca cilmi iyaga, ka dibna la weydiiyey su'aalo taxane ah oo ku saabsan sifooyinka ay dadka, bulshada, iyo dhaqaalaha.
Wax kasta waxaan u sheegay in ilaa hadda ka dhigaysa sanqadhaas sida baadhitaan cilmiga bulshada dhaqanka. Laakiin, waxa soo socda yimaado ma aha dhaqanka, ugu yaraan aan weli. Waxay isticmaalo xogta sahanka si ay u tababaraan model waxbarashada mashiinka a in la saadaaliyo qof Xoolo ka xogta call ay, ka dibna waxa ay model this loo isticmaalaa in lagu qiyaaso maalka dhan 1.5 million macaamiisha. Next, waxay qiyaasay meesha deggan oo dhan 1.5 milyan oo macaamiisha adigoo isticmaalaya macluumaadka juqraafiyeed gundhig in abuse call. Habeynta labadan qiyaasta wada-Xoolo lagu qiyaasay iyo meesha lagu qiyaasay deggan-Blumenstock iyo asxaabtii ay awoodaan in ay soo saaraan qiyaasaha-xalinta sare ee qaybinta juqraafi Xoolo guud Rwanda. Gaar ahaan, waxay ku imaan karaan wax Xoolo lagu qiyaasay kasta oo 2.148 unugyada Rwanda ee, unit yar maamul ee dalka.
Waxa ay ahayd wax aan macquul aheyn in la ansixiyo qiyaaso sababtoo ah weligeed ninna soo saaray qiyaasaha meelaha yar yar sida juqraafiyeed ee Rwanda. Laakiin, markii Blumenstock iyo asxaabtii darka qiyaasta ay 30 degmo oo Rwanda ee, waxay heleen in qiyaasaha ay ahaayeen mid ah qiyaasaha ka deegaanka iyo Survey Health, dahabiga ah ee sahan ee dalalka soo koraya ka. Inkastoo labadan waji soo saaray qiyaas la mid ah ay dhacdo in this, hab ee Blumenstock iyo asxaabta ahaa oo ku saabsan 10 jeer ka dhakhsi oo 50 jeer ka jaban tahay ka Sahamis dhaqanka deegaanka iyo caafimaadka. Kuwani qiyaasta kharashka u xuub dhakhso iyo hoose abuuro fursadaha cusub ee cilmi, dawladaha, iyo shirkadaha (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Waxa intaa dheer in horumarinta habka cusub, daraasaddan waa nooc ka mid ah sida baaritaan inkblot Rorschach; waxa ay dadka u arkaan waxay ku xiran tahay ay ka soo jeedaan. Saynisyahano bulshada badan oo arki qalab cabbirka cusub oo loo isticmaali karo si ay u tijaabiso aragtiyaha ku saabsan horumarinta dhaqaalaha. Qaar badan oo saynisyahano xogta arko dhibaato qabow cusub waxbarasho mashiinka. Qaar badan oo dadka ganacsatada ah ka eeg hab awood leh la furayay qiimaha in xogta digital raad inay horay u ururiyay. Dooda badan oo gaarka ah u arkaan waano cabsi in aanu ku nool nahay waqti of mass socoshada. Qaar badan oo dejiya siyaasadda arki hab in technology cusub caawin kara abuuro adduunka ka fiican. Dhab ahaantii, waa daraasaddan oo dhan waxyaalahaas, iyo in waa sababta ay daaqad mustaqbalka cilmi bulsho.